Nepalese - Colorado Access
स्तन मुख्य तीन भागहरू: ग्रन्थिहरू, धमनी र जोडिएका टिस्युबाट बनेको हुन्छ। क्यान्सर शब्दले रोगहरूका ति समूहलाई जनाउँछ जसले शरीरमा असामान्य वा अनियन्त्रित तरिकाले कोषिकाहरूको विकास गर्छ। स्तनमा असामान्य वा अनियन्त्रित तरिकाले स्तनमा कोषिकाहरूको विकास हुँदा स्तन क्यान्सर हुन्छ। पुरूष र महिला दुबैलाई स्तन क्यान्सर हुन सक्छ।
स्तन क्यान्सरको प्रारम्भिक अवस्थामा सामान्यतया कुनै पनि लक्षणहरू हुँदैनन्। लक्षणहरू देखिनु अगाडि स्तन क्यान्सरको नियमित जाँचहरू गर्नु नै यस बारे केही पत्ता लगाउने उत्कृष्ट उपाय हो। गिर्खा पर्नु र/वा स्तन(हरू) मा दुखाइ हुनु जस्ता लक्षणहरू समावेश हुनसक्छन; तर यी लक्षणहरू हुने अन्य धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। अन्य लक्षणहरूमा सुन्निनु, छाला परिवर्तन हुनु र स्तनको मुन्टोमा परिवर्तन हुनु समावेश हुन्छन्।
तपाईंले आफ्नो परिवारिक इतिहास र आफ्नो व्यक्तिगत इतिहासको बारेमा चिकित्सकसँग कुरा गर्नुपर्छ। तपाईंको चिकित्सकले तपाईंको लागि के राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने छन्।
मामोग्राम एउटा एक्स-रे तस्वीर हो जुन महिलाको स्तन क्यान्सर हुन सक्ने वा हुन नसक्ने संकेत वा लक्षणहरू जाँच्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
The United States Preventive Services Task Force ले निम्न कुराहरूको सिफारिस गर्दछ:
·50-74 उमेरका महिलाहरूले हरेक दुई वर्षमा मामोग्राम गरेको हुनुपर्छ।
·40-49 उमेरका महिलाले उनीहरूको लागि के राम्रो हुन्छ भनी तिनीहरूको आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्नुपर्छ।
·केही राष्ट्रिय संगठनहरूले 50 वर्ष उमेर अगाडि मामोग्राफी जाँच सुरू गर्न सिफारिस गर्छन्। हामीले तपाईंको लागि के राम्रो हुन्छ भनी आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्न सिफारिस गर्छौं।
·40 वर्ष भन्दा कम उमेरका र 74 वर्ष भन्दा बढि उमेरका महिलाहरूले आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्नुपर्छ।
सबै चिकित्सकीय जाँचहरूसँगै, कृपया आफ्नो चिकित्सकसँग तपाईंको लागि के राम्रो हुन्छ भनी कुरा गर्नुहोस्।
एक्स-रे प्राविधिकले तपाईंको स्तनलाई विशेष एक्स-रे मेसिननमा एकपटकमा एउटा राख्दछ। मेसिनले स्पष्ट तस्वीर प्राप्त गर्न सजिलो बनाउन स्तनहरूलाई दबाउँछ। तपाईंले केही सेकेण्डको लागि हल्का दबाव महसुस गर्नु हुनेछ। यो जाँच गर्न लगभग 20 मिनेट लाग्नसक्छ।
पर्दैन, मामोग्रामको अवधिमा विकिरणको मात्र एकदमै न्यून हुन्छ।
तपाईंले कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा जानकारीको लागि मामोग्राम सुविधा जाँच गर्नुपर्छ।
केही उपयोगी उपायहरू यहाँ छन्:
तपाईं अहिले पनि महिनाबारी हुनुहुन्छ भने, आफ्नो महिनाबारी हुनु भन्दा एक हप्ता अगाडिको अवधिमा तपाईंको मामोग्राम तालिका लिने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको स्तन संवेदनशील र सुन्निएको हुन सक्छ। मामोग्राममा दुखाइ कम हुन्छ।
तपाईंलाई स्तन आरोपण छ भने तपाईंले आफ्नो अपोइन्टमेन्ट बनाउदाँ सुविधाहरू बारे थाहा पाउनुहोस्।
खोल्न सजिलो हुने वस्त्रहरू लगाउनुहोस; जसबाट तपाईं कम्मर भन्दा माथिको कपडा मात्र खोलेपुग्छ।
डियोडोरेन्ट वा अत्तर लगाउनाले मामोग्रामलाई बाधा गर्न सक्छ: आफ्नो अपोइन्टमेन्टमा कुनै पनि नलगाउने सुनिश्चित गर्नुहोस्।
·तपाईंले अन्य सुविधामा मामोग्राम गर्नुभएको थियो भने, त्यो एक्स-रे नयाँ सुविधालाई पठाउनुहोस् जसबाट तिनीहरूलाई तपाईंको नयाँ मामोग्रामसँग तुलना गर्न सक्छन्।
मामोग्राममा देखिन सक्ने केही कुराको कारणहरू धेरै छन्। तपाईंले गर्न सक्ने कुरो परिणामहरूको बारेमा कुरा गर्न तपाईंको चिकित्सकसंग फलोअप गर्नुहोस्। परिणामहरू बुझ्न तपाईंको चिकित्सकले सहयोग गर्न सक्छन।
तपाईंकालागिकेउत्कृष्टहुन्छयसबारेमाआफ्नोचिकित्सकसँगकुरागर्नसुनिश्चितहुनुहोस्।तपाईंलेचिकित्सकफेलापार्नसहयोगचाहानुहुन्छभने855-469-7226 (टोलफ्रि) माकलगर्नुहोस्।
गर्भाशय पाठेघरको तल्लो, साघुरो भाग हो। गर्भाशय पेटको तल्लो भागमा पिसाब थैलीको नजिक हुन्छ। गर्भाशयमा असामान्य वा अनियन्त्रित रूपमा कोषिकाहरूको विकास हुँदा पाठेघरको क्यान्सर हुन्छ। क्यान्सर शब्दले रोगहरूका ति समूहलाई जनाउँछ जसले शरीरमा असामान्य वा अनियन्त्रित तरिकाले कोषिकाहरूको विकास गर्छ।
साधारणतया यसको लक्षणहरू हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ उच्च श्रेणीको क्यान्सरमा योनीबाट रक्तश्राव वा स्खलन हुन्छ; तर यी लक्षणहरू देखिने कारणहरू धेरै हुन्छन्। लक्षणहरू देखिनुभन्दा अगाडि नै यसको पत्ता लगाउने उत्कृष्ट तरिका पाठेघरको क्यान्सरको नियमित जाँच हो।
तपाईंले आफ्नो परिवारिक इतिहास र व्यक्तिगत इतिहासको बारेमा तपाईंको चिकित्सकसँग कुरा गर्नुपर्छ। तपाईंको चिकित्सकले तपाईंको लागि के राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने छन्।
प्याप (Pap) जाँचकेहो?
प्याप (Pap) जाँच गर्भाशयमा हुने परिवर्तनहरू पत्ता लगाउने जाँच हो। यसलाई कहिलेकाहीँ प्याप स्मियर पनि भन्ने गरिन्छ।
·21-65 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूले प्रत्येक तीन वर्षमा जाँच गरेको हुनुपर्छ।
·30-65 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूले HPV जाँच पनि त्यही समयमा गर्न सक्छन्। यदि यो प्याप जाँचको समयमा गरियो भने महिलाले जाँच प्रत्येक पाँच वर्षमा गरेको हुनुपर्छ।
·21 वर्षभन्दा कम र 65 वर्षभन्दा बढि उमेर समूहका महिलाले तिनिहरूको चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ।
ह्युमनप्यापिलोमाभाइरस (HPV) केहो?
ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस एउटा संक्रमण हो जसले शरीरका विभिन्न भागहरूमा गिर्खाहरू निकाल्छ। यो एकदम सामान्य हो। यसको 40 भन्दा बढि प्रकारहरू (वा प्रजातिहरू) छन् जसले पुरूष र महिलाहरूको लिङ्गको भागमा संक्रमण गर्छ। प्राय: जसो प्रजातिहरूलाई न्यून जोखिमको रूपमा लिइन्छ। तिनीहरूले पाठेघरको क्यान्सरसँग सम्बन्ध राख्दैनन् र आफै हराउन सक्छन्। यद्यपि, 14 भन्दा बढि प्रकारहरूलाई उच्च जोखिमको रूपमा लिइन्छ र पाठेघरको क्यान्सरसँग सम्बन्ध राख्दछन्। HPV योनिको सम्पर्क, एनल सेक्स वा मुखको सम्पर्क सहित छाला बाट छालाको सम्पर्कबाट सर्छ।
मैलेआफूलाई HPV बाटकसरीसुरक्षितराख्नसक्छु?
एउटामहत्त्वपूर्णतरिका 21 वर्षलागेपछिनिरन्तरप्यापजाँचहरूगरेरतपाईंलेआफूलाईयसबाटसुरक्षितगर्नसक्नुहुन्छ। HPV विरूद्धखोपलगाउँनालेपनितपाईंलाईयसबाटसुरक्षितहुनमद्दतगर्नसक्छ।योखोप 11-26 उमेरसमूहकामहिलाहरूर 11-21 उमेरसमूहकापुरूषहरूकोलागिउपलब्धछरयसकोतीनमात्रालिनुआवश्यकताहुन्छ।तपाईंलेखोपलगाउनुभएपनिअझैनिरन्तरप्यापजाँचगर्नुपर्छ।
तपाईंको महिनावारी चक्रको मध्यतिर प्याप जाँच गर्न सिफारिश गरिन्छ। तपाईंको महिनावारी अवधिमा गरिने प्याप जाँचमा बाधा हुनेछ।
पाठेघरको क्यान्सरको जाँच सरल र छिटो छ। यसले एक मिनेट भन्दा कम समय लिन्छ। तपाईं परीक्षण टेबलमा रहँदा, तपाईंको चिकित्सकले योनि खुलाउँन एउटा विशेष उपकरण (स्पेकुलम) प्रयोग गर्छ।
प्याप जाँचको लागि, पाठेघरबाट केही सङ्ख्यामा कोषहरू ब्रुस वा अन्य उपकरणले निकालिन्छ। कोषहरू तरल पदार्थ भित्र राखिन्छ र ल्याबमा पठाइन्छ। HPV को जाँचका लागि, कहिलेकाहीँ प्याप जाँचको लागि लिएको एउटै नमुना प्रयोग गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ, कोषिकाको दुईवटा नमुनाहरू लिइन्छ।
कोलोरेक्टलले मलद्वार वा मलाशयलाई जनाउँछ। तपाईंको शरीरको यो भाग तपाईंको ठूलो आन्द्राको अन्तिममा हुन्छ। क्यान्सर शब्दले रोगहरूको समूहलाई जनाउँछ जसले शरीरमा असामान्य वा अनियन्त्रित तरिकाले कोषिकाहरूको विकास गर्छ। मलद्वारमा कोषिकाहरूको असामान्य तरिकाले विकास हुँदा कोलोरेक्टल क्यान्सर हुन्छ। प्राय: यी असामान्य विकासहरूलाई पोलिपहरू भनिन्छ र क्यान्सर वा गैर-क्यान्सर हुनसक्छन् (बिनाइन)।
मलद्वारको क्यान्सरमा विभिन्न व्यक्तिहरूले भिन्न लक्षणहरूको अनुभव गर्छन्। केही व्यक्तिहरूले कुनै पनि लक्षणहरूको अनुभव गर्दैनन्। सबैभन्दा समान लक्षण दिसामा रगत देखा पर्नु हो; तर यो लक्षण देखा पर्नुमा धेरै कारणहरू हुन्छन्। लक्षणहरू देखिनु अगाडि कोलोरेक्टल क्यान्सरको नियमित जाँचहरू गर्नु नै यसको केही पत्ता लगाउने उत्कृष्ट उपाय हो।
The United States Preventive Services Task Force मार्गनिर्देशनहरूले ले निम्न कुराहरू सिफारिस गर्दछ:
·50 देखि 75 उमेरका पुरुष र महिलाहरूले उच्च संवेदनशील दिसा सम्बन्धि अदृश्य रगतको जाँच FOBT (फोब्ट), अदृश्य इम्युनोकेमिकल जाँच FIT (फिट), लचिलो सिग्मोइडोस्कोपी वा कोलोनोस्कोपी मार्फत जाँच गर्नुपर्छ।
oFOBT वा FIT गर्न रोज्ने पुरुष र महिलाहरूले प्रत्येक वर्ष जाँच गराउँनुपर्छ।
oलचिलो सिग्मोइडोस्कोपी गर्न रोज्ने पुरुष र महिलाहरूले प्रत्येक पाँच वर्षमा जाँच गराउँनुपर्छ।
oकोलोनोस्कोपी गर्न रोज्ने पुरुष र महिलाहरूले प्रत्येक दश वर्षमा जाँच गराउँनुपर्छ।
·50 वर्ष भन्दा कम उमेरका र 75 वर्ष भन्दा बढि उमेरका पुरुष र महिलाहरूले आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्नुपर्छ।
सबै चिकित्सकीय जाँचहरूसँगै, तपाईंको लागि के राम्रो हुन्छ बारेमा आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्नुहोस्।
अदृश्यइम्युनोकेमिकलजाँच (FIT) भनेकोकेहो
अदृश्य इम्युनोकेमिकल जाँच (FIT) अनुहारमा रगत फेला पार्न प्रयोग गरिने जाँच हो। यस जाँचले अन्य तरिकाबाट नदेखिने रगत पत्ता लगाउन सक्षम हुन्छ। तपाईंको आफ्नै घरमा गोपनीयता राख्नका लागि जाँच छिटो र सजिलो हुन्छ र कुनै विशेष तयारीको आवश्यकता पर्दैन। तपाईंको FIT मा पोजेटिभ जाँच भेटिएमा, रक्तस्रावको कारण निर्धारण गर्न तपाईंले आफ्नो चिकित्सकसँग फलोअप जाँचका लागि तालिका बनाउँनुपर्छ।
यदि जाँच परीक्षणमा असामान्यता फेला परेमा, अतिरिक्त जाँचहरू सिफारिस हुन सक्नेछन्। यी परिक्षणहरूमा गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्रयाक्टको एक्स-रे, सिग्मोइडोस्कोपीवा प्राय: गरी कोलोनोस्कोपीसमावेश हुन्छन्। तपाईंले गर्न सक्ने उत्कृष्ट कुरा भनेको आफ्नो परिणामहरूको बारेमा आफ्नो चिकित्सकसँग कुराकानी गर्नु हो। परिणामहरू बुझ्न तपाईंको चिकित्सकले मद्दत गर्न सक्छन्।
सिग्मोइडोस्कोपी भनेको एक परीक्षण हो जसले कोलोरेक्टल क्यान्सर पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। यसमा लगभग तपाईंको औंलाको मोटाइ बराबरको ट्यूब लिने र यसलाई विस्तारै मलद्वारमा घुसाउँने गरिन्छ। यसलाई विस्तारै मलद्वार र तल्लो कोलनमा अगाडि बढाइन्छ र पोलिप, रक्तस्राव वा क्यान्सर सम्बन्धिको विकासहरूको पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।
कोलोनोस्कोपी भनेको एक परीक्षण हो जसले कोलोरेक्टल क्यान्सर पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। यसको प्रक्रियामा पातलो, लचकदार ट्यूब लिने र यसलाई विस्तारै मलद्वारमा घुसाउँने कार्य समावेश हुन्छ। त्यसपछि यसले चिकित्सकलाई कोलन र ठूलो आन्द्राको भित्रि रेखाहरू हेर्न अनुमति दिन्छ।